Jaljala Online – Page 56 – Jaljala Online
जेठ ५, रुपन्देही । बुटवल – रुपन्देहीका एक युवाले आफ्नै बाबुसँग अपहरणको नाटक गरेर फिरौती मागेका छन् । अपहरणको नाटक गरी आफनै बाबुसँग २ लाख रुपैया फिरौंती माग गर्ने रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरपालिकाका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गत बैशाख ५ गते घरबाट निस्किएर सम्पर्कविहिन भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नं. ८ बस्ने जोखन मुसलमानका २२ […]
जेठ ५, काठमाडौँ । हिजोअस्तिको काठमाडौं ताहाचलको घर मेरा बाले म जन्मिएपछि किन्नुभएको हो। मेरा बा पाटनबाट ताहाचल आउँदा सुरूमा डेरा बस्नुभएको थियो। मेरो जन्म त्यही डेरामा भयो। दाइ र दिदी दुवै वीर अस्पतालमा जन्मेका हुन्। सायद त्यस बेलाका नामुद स्त्री तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. सावित्री गुरुङको निगरानीमा। म भने घरमै जन्मेँ। बिहान गर्भवती श्रीमती […]
Posted on May 19, 2019 May 19, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
त्रिशुली बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो (लिस्टसहित)
जेठ ५, धादिङ । धादिङको गजुरी गाउँपालिका –६ बन्छेटारस्थित त्रिशुली नदिमा बस खस्दाँ मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ। पाँच जनाको घटनास्थलमा र तीन जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख हेमराज घिमिरेले जानकारी दिए। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँको थानकोट घर भएका ५१ वर्षीय राजकुमार सुवेदी, काठमाडौँ चन्द्रागिरीका ३६ वर्षीय सीता थपलिया, […]
जेठ ४ । भारतमा लोकसभा चुनावको मतगणना हुनुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसार सकेर ध्यान गर्न गुफामा पसेका छन् । उत्तराखण्डस्थित ‘ध्यान कुटिया’ मा उनी शनिबारदेखि ध्यान बसेका हुन् । उनको पहेँलो वस्त्रमा ध्यानस्थ मोदी आइतबार बिहान मात्रै ध्यानबाट उठ्ने बताइएको छ । भारतीय च्यानल ‘एएनआई’ ले उनी गुफाभित्र ध्यान गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक […]
जेठ ४, धनुषा । डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय घेराउ गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार विधेयकको विरोध गर्दै जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय घेराउ गरेको हो । शनिबार जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघबाट नारा जुलससहित निस्केको जनमत पार्टीको ¥याली […]